Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ထလော.ပြည်သူပြည်သူထလော.( အပြည်အစုံ)
at 10/03/2015 02:12:00 AM
အထွေထွေရွေးကောက့်ပွဲနှင်.ပတ်သက်၍ အိက်ဂေါ၏ ရူမြင်သုံးသက်ထားသောစာစုလေးကို အနှစ်ချုပ်ဘာသာပြန်ဆို၍ မျဝေပေးထားပါတယ်။
ထလော.ပြည်သူပြည်သူထလော.ဟုအမည်ရ စာစုလေးဖြင်.အိက်ဂေါကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျတသောရွေးကောက်ပွဲတခု ဖြစ်ပါမည်လား ဆိုတဲ.အမေးအပေါ်သူ.အမြင်ကို အမြင်အတိုင်းသုံးသပ်ပြသွားတာတွေ.ရပါတယ်။
အပြည့်အစုံကို ပူးတွဲပါဖိုင်မှာ ဖတ်ပါရန်.
ထလော.ပြည်သူပြည်သူထလော. (အိက်ဂေါ၏ အမြင်နှင်. အတွေး)
ပကတိအနေအထားမှာ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုစံနစ်တကျကြိုးကိုင်ထားတာကိုမြင်ရပါတယ်။ အကွက်ချထားသောအစီအမံ များကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ပုံက စံနစ်ကျပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ များဖြစ်နေပါလဲလို.မေးရင် အမေးကိုအဖြေမထုတ်ခင်မှာ ရှေ.ကိုအတော်ရောက်သွာပြီး သတိပြုမိတဲ. အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို.တွေနောက်မှာပြတ်ကျန်ရစ်ပြီး အချိန်နှောင်းသွား တာတွေကြုံခဲ.ရပြီးပါပြီ။ ဥပမာ မဘသ ကိစ္စက အစ ယခုရွေးကောက်ပွဲကိစ္စမှာ လည်း ကျွန်တော်တို.က လွတ်လပ်ပြီးသန်.ရှင်းတဲ.ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာမလားလို. မေးခွန်းထုတ်နေချိန်မှာ ကျွန်တော်တို. အချိန်နှောင်း သွားပြန်ပါပြီ။ ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်သွားသလဲဆိုတာ အုက်ဂွေက ဒီလိုသုံးသပ်ပြထားတာ သတိထားရမဲ.အရေးကြီးတဲ.အချက်တွေပါ။
၁. စစ်တပ်နဲ. စစ်တပ်ကထွက်တဲ.လူ.မလိုင် လူတန်းစားတွေပါ။ သူတို.က နိူင်ငံတောာ်ရဲ. အဖွဲ.အစည်းပိုင်းက အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ.အစည်းတွေ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊နဲ. သူ.ရဲ.လက်ပါးစေနိူင်ငံရေးပါတီတွေကိုကောင်းစွာ ထိမ်းချုပ်ထားနိူင်စွမ်းရှိနေတာ သတိထားရပါမယ်။ ဒါကြောင်.သူတို.ရဲ.ပစ်မှတ်က ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလှည်.စားနိူင်ဖို.သိသိသာသာေ၇ာ ငွေကြေးပိုင်း အရပါအားကောင်းကောင်းနဲ.တောက်လောင်စေတဲ.လောင်စာတွေထည်.ပေးနေတာသိသာပါတယ်။
၂. မဲခိုးမဲ.လုပ်ရပ်ကတော. မရိုးမသားအရှက်မဲ.စွာလုပ်မှာမဟုတ်ဖူး။ ဒါပေမဲ.နည်းဗျုဟာကျကျလုပ်နေတာ ပုံစံအမျိုးမျိုး နဲ.တွေ.နေရပါသတဲ.။ ဒေသအချို.တွေကိုသတ်မှတ်ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နေတာတွေ.နေရပါတယ်။ အချို.မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ နည်းဗျုဟာ တမျိုးထက်ပိုသုံးနေတာတွေ.နေရတယ်။ နည်းဗျုဟာအသုံးပြုမူတွေကိုအခြားမဲဆန္ဓနယ်တွေမှာဆိုရင် ဗျုဟာတွေကိုပေါင်းစပ် (combination) ပြီးကျင်.သုံးနေတာတွေရှိနေပါတယ်။ ကြည်.ရတာ ခလုတ်တွေတပ်ထားပြီး နေရာအလိုက် လိုတဲ.ခလုတ်တွေနှိပ်နေတဲ.သဘောလို.ပြောလို.ရပါတယ်။
ကြိုးကိုင်နေတဲ.မဟာဗျုဟာကိုတနေရာထဲကထိန်းချုပ်နေတာမဟုတ်ပဲဖြန်.ကြက်ချထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ. တပေါင်းတစည်းတည်းသော စုစည်းသက်ရောက်မူ.အားတွေဖြစ်စေအောင်ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်တဲ.။ သုံးသပ်ကြည်.ရင် ဒါတွေရဲ.နောက်ကွယ်မှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ.စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမြင်ရှိတဲ. အဖွဲ.က လွတ်လပ်သောပြည်သူဘ၀ ကိုပေးလိုတဲ. ဆန္ဒအသင်.မဖြစ်သေးဖူဆိုတဲ.သဘောပါပဲ။ သူတိုနဲ.အတူ စစ်ဘက်က ရဲဘော်ဟောင်း များကလည်းနိူင်ငံတော်ရဲ.အဖွဲ.အစည်းနေရာတွေ ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ နဲ.အခြားသောလက်ဝေခံ ပါတီတွေ၊မှာစိမ်.၀င်ပြန်.နှံ.နေတဲ.ကွန်ယက်ကြီးတွေဖြစ်နေပါသတဲ.။
၃.ယခုလက်ရှိမှာကျင်.သုံးနေဆဲနဲ.နောင်မှာကျယ်ကျယ်ပြန်.ပြန်.သုံးနိူင်ခြေရှိလာနိူင်မည်.နည်းဗျုဟာတွေကိုပြန်ကြည်. ရင်တွေ.ရမည်.နည်းဗျုဟာတွေကတော. အောက်မှာဖေါ်ဲပဲခြင်ပါတယ်။
၃.၁ . မဲဝယ်ယူမူ. --- နည်းမျိုးစုံ၊ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ.တွေ.နိူင်ပါတယ်။ ဒုနဲ.ဒယ်နဲ.ဖြစ်နေတာပါ။
၃.၂ . မဘသ က မောင်းနှင်ပေးနေသော မဲဆွယ်ကမ်းပိန်းများ -- ကြံ့ခိုင်ရေးမဲရရှိရေးနဲ.အနိူင်ရရေးအတွက် နောက်ကအဓိကပံ့ပိုးပေးနေတဲ. အမျိုးသားရေးအခြေခံဘုန်းတော်ကြီတွေ ပါနေပါတယ်။ မဘသ အောင်ပွဲ ၁၄ ရက် သတ်မှတ်ထားပြီး အစီအစဉ်ကောင်းကောင်းနဲ. အတိုက်အခံတွေကို ဆန်.ကျင်ကြဖို.လှုံ.ဆော်ကမ်းပိန်းတွေကိုလှိုင်းခတ် သွားအောင် ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ မဘသ ရဲ. သူတို.အကြိုက်သတ်မှတ်ထားသူ ရွေးကောက်ပွဲ မဲအနိင်ရရေး ကမ်းပိန်းတွေ ကိုတအိမ်တက်ဆင်း လုပ်ဆောင်နေသလို တဖက်ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲစောင်ကြည်.ရေး တွေရောပြီး လှုံ.ဆော်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။
၃.၃ . ခြိမ်းခြောက်မူ.ပုံစံအမျိုးမျိုး --- နောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကို အကျိုးသက်ရောက်စေနိင်တဲ.အရေးကြီးသော နည်းဗျုဟာလို.ဆိုနိူင်ပါတယ်။ ဘ၀မလုံခြုံမူတွေ အကြောက်တရားတွေလွှမ်းသွားစေ အောင်ရည်ရွယ်ချက်အမျိုး မျိုးနဲ.လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတာပါ။ နောက်ပါနောက်လိုက်အခြံအရံ အေးဂျင်.အမျိုးစုံမွှေးထားတာပါ။ အနိမ်.စား ထောင်ထွက်ရာဇ၀င်လူဆိုးတွေ၊ စွမ်းအားရှင်တွေ၊ စစ်တပ်နဲ.အလွမ်းသင်.တဲ.လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေ၊ ရန်ဖက်ပြုစိတ်ထားရှိသောဘုန်းကြီးအုပ်စုတွေ၊ ဒေသတွင်းအစိုးရအာဏာပိုင်တွေ၊ ပါဝင်နေတာတွေ.ရမှာပါ။ . ခြိမ်းခြောက်မူ.ရဲ.နောက်ကွယ်ကရည်ရွယ်ချက်အစုံတွေ.ရပါတယ်။
က - မဲထည်.သူဦးရေလျော.သွာစေရန်
ခ - တိုက်ရိုက်မဲပေးမူ.အပေါ်သက်ရောက်စေရန်
ဂ -့ ကျီးလန်.စာစားထိန်.လန်.နေစေရန်
ရွေးကောက်ပွဲကြောင်.အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်ပါကတိုင်းပြည် ကမောက်ကမနှင်.မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပေါ်စေ နိူင်သည်ဟူသော ကြောက်လန်.စိုးရိမ်မူ.များဖြစ်စေရန်
ဃ - နောက်ဆုံးခံစစ်ကြောင်း အနေဖြင်.အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မူများကိုလှုံ.ဆော်နိူင်ပြီး တိုင်းပြည် လူမျိုး နှင်.သာသနာ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေပြီး ဟုလူထုကို စိုးရိမ်ကြောက်လန်.စေမူ.ပိုမိုဖြစ်စေခြင်း စသည်တို.ဖြစ်နိူငပါတယ်။
၄. မဲစာရင်းမမှန်မကန်ဖြစ်နေခြင်း --- ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်လူထုယုံကြည်မူပျက်ပြားစေနိူင်ပါသည်။ ယခုကဲ.သို.ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဲစားရင်းမမှန်မကန်ဖြစ်ရပ်များကြောင်. နိူင်ငံရေး ပါတီများ အောက်ခြေလူတန်းစား တက်ကြွလှုပ်ရှားမူ.များကြောင်.အားမာန်အပြည်.ရရှိလာမည်.မြန်မာ.လူဘောင်အဖွဲ.အစည်းတခုလုံး ၏ ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည် နိူင်မူအပေါ်စမ်းသပ်စိမ်ခေါ်နေမူ.အဖြစ်သုံးသပ်နိူင်ပါသည်။ မဲမမှန်မကန်မူဖြစ်မူများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွါးစေခြင်းကြောင်. သာမန်ပြည်သူများအနေဖြင်.မိမိတို.ဆန္ဒအမှန်ဖေါ်ထုတ်လိုသောခံယူချက်သဘောထား ကို်ဆက်လက်မရပ် တည် နိူင်သောစိတ် ခံစားမူ.များဖြစ်စေနိူင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မဲစာရင်းမှားယွင်းမူဖြစ်ရပ်များသည် တမင်ဖန်တီးနေသော စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးတရပ်အဖြစ်ထင်မြင်ရပါသည်။ သို.မှသာအထက်ဖေါ်ပြပါရည်ရွယ်ထားမူများ အရာရောက်စေခြင်းဖြင်. မဲပေးသူဦးရေလျော.ကျခြင်းများဖြစ်ပွါးလာခြေရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို.ကြိုတင်ပြင်ဆင်မူများသည်ရွေးကောက်ပွဲဆန္ဒမဲပေးသည်.နေ.တွင်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန်မလိုတော.
၅ - လက်ဝေခံနိူင်ငံရေးပါတီများ သို.မဟုတ် မိမိလက်တွင်းမှတိုင်းရင်းသားနိူင်ငံရေးပါတိများကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စား အသုံးပြုထားခြင်း
၆ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင်. NLD ပါတီကိုမမှန်မကန်ပုပ်ခတ်ဝေဖန်ရှုံ.ချခြင်း။ ယင်းသို.နှိမ်.ချတိုက်ခိုက်ခြင်းနည်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန်.ပြန်.စံနစ်တကျအကွက်ဆင်ပြီး ၀ါဒဖြန်.သူများ၊ တဆိတ်ကိုတအိတ် လုပ်တတ်သူများ၊ စစ်အစိုးရဘက်တော်သား တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအုပ်စု များကပံ့ပိုးကူညီပေးနေ မူ.များ(ဦးဝိရသူကဲ.သို. တက်ကြွသူများနှင်.FB) ရှိနေခြင်းသည်လည်းစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအနေထားမျိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာ - NLD ပါတီအား အစ္စလာမ်ပါတီဟု လူထုဟောပြောပွဲကဲသို.သော အခမ်းအနားများတွင် တံဆိပ်ခပ်နှိပ်ခံရစေရန် မဘသ ၏အား ထုတ်နေမူ.များ ကိုမကြာမီကာလအတွင်းလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ.ကြ ပြီးဖြစ်သည်။ အလွန်စိုး၇ိမ်ဖွယ်ရာမျိုးပင်ဖြစ်ပြီး ယင်းကဲ.သို. အလားတူမျိုးဖြစ်ရပ်များရွေးကောက်ပွဲနေ.မတိုင်မီ ၁၀ ရက်ခန်.မျအလိုတွင်ထပ်မံဖြစ်လာ နိူင်ဖွယ်ရှိ နေသေးသည်။
ဥပမာ -- ရွေးချယ်ခံရသောအမတ်များလဒ်ပေးလဒ်ယူမူများသည် လည်းသမ္မတရွေးချယ်ပွဲမတိုင်မီဖြစ်နိူင်ဖွယ်ရာများ အပြင် မည်သူသမ္မတဖြစ်မည်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးမူ.ကိစ္စရပ်များလည်းပါဝင်နိင်ပါသည်။
ဖေါ်ပြပါကိစ္စရပ်များအတွက်စိတ်မချမ်းမြေ.ဖွယ် စိတ်ဓါတ်ကျဖွယ်များဖြစ်သော်လည်း အားတက်ဖွယ်ရာစကားများ ပြောရန်ကျန်ပါသေးတယ်။
ပဌမပိုင်းမှာ သူတို.ကျင်.သုံးနေတဲ.နည်းဗျုဟာပိုင်းကိုဆန်းစစ်ပြထားပြီးယခုဒုတိယပိုင်းမှာတော. အတိုက်အခံတွေ၊ ဒီမိုကရက်အင်အားစုတွေနဲ. ပတ်သက်တဲ. ပကတိအခြေအနေတွေကို မေးခွန်ထုတ်စရာကျန်ပါသေးတယ်။ ဒါတွေကတော. လက်ရှိခင်ဗျားတို.ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ. စွမ်ဆောင်နိူင်မူအားတွေကို ပြည်သူတွေရောအားလုံးကပါ သတိထားစရာ တွေကိုထောက်ပြလိုပါတယ်။ အိက်ဂေါ ရဲ.မေးခွန်းတွေကလူတိုင်းသိချင်နေကြတဲ.ပဠေဟိတွေကို ထင်ဟပ်ထားသလိုခံစားရပါတယ်။
၁။ သူတိုရဲ.ဆောင် ရွက်နိူင်စွမ်းတွေကရော ဘယ်လောက်ထိကောင်း နေသလဲ ပေါ.။ စစ်တပ်၊ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ နဲ.သူတိုရဲ.အခြားလက်ဝေခံပါတီတွေကရော နောက်သမ္မတရွေးချယ်နိူင်လောင်အောင် ၂၅% +၂၆% အရေအတွက်ကိုရစေနိူင်လောက်အောင် စွမ်းပါ.မလား။ ပြိုင်ဘက် NLD ကိုကောက်ကျစ်တဲ.နည်းတွေ သုံးပြီးကျော် ဖြတ်နိူင်စွမ်းရှိနေသလားဆိုတာ မေးသင်.တဲ.မေးခွန်းမဟုတ်ပါလား။
၂။ ယခုကျင်သုံးနေတဲ. သူတို.နည်းဗျုဟာတွေရဲ. ထိရောက်မူကဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
ဒီအမေးသုံးခုကိုတပေါင်းတည်းအဖြေထုတ်ပေးထားတာတွေ.ရပါတယ်။ ပထမအမေးကိုတော.လိုရင်းဖြေရရင် နုိုး ပါပဲ။ မဖြစ်တန်ရာလို.ပဲပိတ်ပြောခြင်ပါတယ်။ အလကားရထားတဲ.စစ်တပ်မဲ၂၅% နဲ.စံနစ်တကျကြိုးကိုင်ထား တာတွေရှိနေသော်လည်း ယခုအနေအထားနဲ.အချိန်ထိတော. ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်က ပွင်.နေတဲ.လမ်းလိုပဲဗျ။ ဒါပေမဲ.ဒီအတိုင်းကြီးပွင်.နေပေမဲ.ခင်ဗျားတို.လျောက်တတ်ဖို.နဲ.လျှောက်ကြဖို.လိုသေးတယ်။ ဒါကြောင်.ဒီအတိုင်းနေသွားရမဲ.အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဖူး။ ကျွန်တော်တို.အချင်းချင်းကြားမှာပေါင်စပ်ညှိနိုင်းလုပ်ဆောင်စရာတွေပိုလုပ်ဖို.လိုနေပါပြီ။
အခက်အခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်နိူင်ဖို.အုံလိုက်ကျင်းလိုက်အစည်းဝေးပွဲကြီးတွေ၊နဲ.လူတွေထောင်ချီသောင်းချီပါဝင်လှုပ်ရှားရမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဖူး။ သာမန်လက်တွေ.ကျကျနဲ.ကွန်ယက်အချိတ်အဆက်အမျိုးမျိုးက စွမ်းစွမ်း တမန်ဆောင်ရွက်နိင်မည်.လူတွေလောက်ပါရင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတိုရဲ.အရည်အချင်းက သူတို.ရဲ.ကွန်ယက်ကြီးတွေအပေါ် သူတို.ရဲ.သြဇာအရှိန်အ၀ါ ဖြန်.ချနိူင်ဖို.သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာဗျာ သူတို.အဖွဲ.တွေ တွေ.ဆုံကြတဲ.အစည်းအဝေးလိုပွဲမျိုးတပတ်တကြိမ်လုပ်ကြပြီးခွဲဝေတာဝန်ယူတာတို.၊ သတင်းတွေဖြန်.ချိဝေဌ တာတို.စတာတွေလုပ်ကြဖို.ကအနိမ်.ဆုံးလိုအပ်တဲ.ပေါင်းစပ်ညှိနှုင်းမူ. တွေဖြစ်လာနှိုင် တာပေါ.။
အချို.သောဒေါသထွက်နေကြတဲ.သူတွေ၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေကြသူတွေ၊နာကျင်ခံစား နေသူတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းခံစားနားလည်မိပါတယ်။ တဦးနဲ.တဦးယုံကြည်မူ. ကင်းမဲ.နေကြတာတွေအကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ.ကြတာကိုလည်းသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ.ဒီဒုက္ခတွေကျောပိုးထားနေရခြင်းနဲ.လုပ်စရာတွေလည်းရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေးမိသလောက်ပြောချင်တာပါ။ ကျွန်တော်တို.တွေအားလုံး.လက်ရှိအနေအထားတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို.အချင်းချင်းကြားမှာထိရောက်တဲ.ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်မူတွေကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်ဖို.ကတော.တကယ်.အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ပါပဲ။ NLD တွေ၊တိုင်းရင်းသား နိူင်ငံရေးပါတီတွေ (ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို.သိထားပြီးဖြစ်တယ်။)၊ရှစ်ဆယ်ရှစ်မျိုးဆက်သစ်တွေ၊သံဃာအရေးတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ.ကြတဲ.သံဃာထု၊ အဓိကပညာရှင်အဖွဲ.အစည်းတွေ (ဥပမာ ရှေ.နေများအဖွဲ.) နဲ.အတူအရပ်ဖက်လူမူအဖွဲ.အစည်းတွေ (ကွန်ယက်များ) စသဖြင်.ပေါ.ဗျာ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ခဲ.လို.ကတော.ကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာပြောခဲ.သလို ကျွန်တော်တို.သိပ်နောက်ကျ သွားပြန်ပါပြီဖြစ်ဦး တော.မှာပါပဲ။
ဒီအချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါရစေ၊ ဒီအတွက်ကြောင်. အောင်မြင်ခြင်းမှလမ်း ချော်သွားခြင်း၊အဆိုးမြင်မူတွေကိုပြန်.နှံသွားစေခြင်းစတာတွေကိုတော.မလိုလားတာအမှန်တရားနဲ.သစ္စာစကားပါ။
နောက်ဆုံးနိဂုံးအနေနဲ.မီဒီယာကိုထင်မြင်ချက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အလှမ်းမှီနေတဲ.ပုံနှိပ်ရေးသားထုတ်ဝေနေတာတွေရောအွန်လိုင်းပီဒီယာတွေရောကြည်.ရင်သူတို.ဘက်ကအကောင်ဆုံးနဲ.သန်.သန်.ရှင်းရှင်းလုပ်နေကြတာတွေ.ရပါတယ်။ အထက်ဖေါ်ြ့ပထားတဲ.အနိူင်ကျင်.ထိန်းချုပ်ကစားနေတဲ.နည်းဗျုဟာတွေကိုလူထုကိုဖွင်.ပြနေပါတယ်။ ဒါကအရမ်းအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင်.လည်းဆိုတော.ဖုံးထားတာတွေကိုဖွင်.ပြ နေတာကိုက ပညာပေးခြင်းဖြစ်လို.ပါပဲ။ ဒါပေမဲ.ဒီမီဒီယာတွေကကျေးလက်ကလူထုနဲ.မြို.စွန်မြို.ဖျားမှာနေထိုင်ကြသူတွေထံဘယ်လောက်အထိအရောက်သွားနိူင်မှာလဲဆိုတဲ.အမေးကကျွန်တို.အားလုံးကိုစိမ်ခေါ်နေဆဲပါလို.ထောက်ပြထားပါတယ်။။ ဒီလိုအရောက်အပေါက်နဲပြီး လူထုနဲ.အလှမ်းဝေးတဲ. နေရာတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ မဲတွေအတွက်တော.တကယ်.စစ်တလင်းတွေဖြစ်နေပါသတဲ.။
ဒါတွေကို အားလုံးကောင်းနေပါတယ်လို.ပြောနိူင်ပေမဲ.လုံလောက်ပါရဲ.လား ဆိုရင်တော. လိုနေတာတွေရှိနေ ပါသေးတယ်။ ဘာတွေများလိုနေတာလဲအိက်ဂေါရေ။
ခင်ဗျားတိုတတွေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကြပါ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ သွက်သွက်လက်လက်၊ ထက်ထက်မြက်မြက် သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဝေမျှကြပါ။
ထပ်ပြောပါရစေ - ခင်ဗျားတို.တတွေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကြပါ။ ဒါကိုအခုပဲအချိန်မနှောင်းသေးခင်လုပ် ဖို.လိုပါပြီ။ နေ၀င်ချိန်မှဆိုရင် အမှောင်ကျလာပါတော.မယ်။